यौन जिज्ञासा::आर एम खबर
महिला र पुरुषले कुन उमेरमा बढी से*क्सको मज्जा लिन्छन् ? अनुसन्धान यसो भन्छ
यौ*न सम्पर्क वारे धेरै थरि मान्यता छ । कुन उमेरमा गरिएको यौ*न सम्बन्ध बढी रोमान्चक र आनन्ददायक हुन्छ भन्ने बिषयमा धेरै अध्ययन एवं अनुसन्धान भएको छ । पछिल्लो पटक गरिएको एक अध्ययन अनुसार २८ वर्षको उमेरमा गरिने यौ*नसम्पर्क महिलाको लागि सबैभन्दा आनन्ददायक हुने बयान गरेका छन् । पुरुषको हकमा भने अलि भिन्न हुने गर्छ । अध्ययन अनुसार ३३ वर्षको उमेरमा पुरुषले सबै भन्दा धेरै आनन्द...
फेरि एकाएक भाईरल बन्यो कोरियान काण्ड (भिडियोसहित)
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न इन्टरनेटमा बस्ने बानी कत्तिको छ ? कतै तपाई सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट भिडियो कल वा यस्तै संवादमा देखिने दृश्य रेकर्ड हुनेगरि कुरा गर्नुभएको त छैन ? तपाईका श्रीमान अथवा ब्वाइफ्रेन्ड विदेशमा छन् कि ? कतै उनीहरुसँगै छिल्लिएर भिडियोमा कुराकानी गर्ने बानी छ भने साबधान ! सम्झनुस तपाई अब फस्नु भयो ! अझै तपाई यहि कुराकानीमा नांगिनुभएको छ भने त पक्का हुनुस् तपाईको...
दोहा कतारको भुमिमा एक ऐतिहासिक ईद मिलन कार्यक्रम सप्पन्न
दोहो कतार – मिति ३ शव्वाल १४४० हिजरी तदनुसार ६ जून २०१९ , तथा बि सं २०७६ जेठ २९ गते बिहीवारका दिन कतार को केन्द्रिय शहर दोहा मा अबस्थित एक भव्य सम्मेलन हलमा फखरे मिल्लत नेपाल को तर्फ बाट ईद को पवित्र अवसर मा एक ऐतिहासिक ईद मिलन कार्यक्रम को आयोजना गरियो । उक्त सम्मेलन हल मानिस हरु को अत्याधिक उपस्थिती ले भरिएको थियो...
२ महिला माथि जंगलमा लगेर दिउसै सामुहिक बलत्कार
काठमाडौं । बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको जत्ति निन्दा गर्दा पनी सायद कमै हुन्छ । तर नेपालमा पछिल्ला दिनहरुमा लगतार बलात्कारका घटनाहरु बढ्दै गएका छन् । रामेछापमा दुई महिला बलत्कृत भएका छन् । लिखु तामाकोसी गाउँपालिकाका दई महिलामाथि ट्रकमा सवारी चालक सहितको समुहले बलात्कार गरेको खुल्न आएको छ । लिखु तामाकोसी गाउँपालिका–७ तिल्पुङको ढ्याङग्रेको जंगलमा एक विवाहित र एक जना अविवाहित महिलामाथि ट्रकमा सवार व्यक्तिहरुले बलात्कार...
काठमाडौं | बुवा र आमा यौनसम्पर्क गरिरहेको प्राय थाहा पाइरहन्छु कुनैबेला त देखेरपनि नदेखे जस्तो गर्नुपर्छ । जसको कारण मेरो मनमा उहाँहरु प्रति नराम्रो छाप बसेको छ । यसले गर्दा मलाई दिक्दार लाग्न थालेको छ । यो परिस्थितिमा म कसरी सफलता हासिल गर्नसक्छु ? कतिपय परिवारमा अभिभावकहरु बीचको यस्तो यौन क्रियाकलापका गतिविधिहरु भएका हुन्छन र कतिपय छोराछोरीहरुले थाहा पाएका हुन्छन् । यो एक किसिमको खुल्ला...
जापान कान्ड सेलाउन नपाउदै फेरी बाहिरियो कोरिया कान्ड !! नेपाली युबतीको अश्लिल भिडियो भाईरल !
जापान कान्ड सेलाउन नपाउदै फेरी अर्को कोरिया कान्ड सुरु हेर्नुहोस् नेपाली युबतीको अश्लिल भिडियो भाईरल !!! सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न इन्टरनेटमा बस्ने बानी कत्तिको छ ? कतै तपाई सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट भिडियो कल वा यस्तै संवादमा देखिने दृश्य रेकर्ड हुनेगरि कुरा गर्नुभएको त छैन ? तपाईका श्रीमान अथवा ब्वाइफ्रेन्ड विदेशमा छन् कि ? कतै उनीहरुसँगै छिल्लिएर भिडियोमा कुराकानी गर्ने बानी छ भने साबधान ! सम्झनुस...
बेश्यालय पुगेका श्रीमानले आफ्नै श्रीमतीलाई यस्तो हर्कत गरेको देखेपछि भयो कसैले नसोचेको घटना !!
बेश्यालय पुगेका श्रीमानले आफ्नै श्रीमतीलाई यस्तो हर्कत गरेको देखेपछि भयो कसैले नसोचेको घटना!! सुपर एक्स्प्रेसले छापेअनुसार श्रीमान–श्रीमती एक स्थानीय बेश्यालयमा एकअर्कालाई हेरेर छक्क परेको खबर छ । जहिले श्रीमानले अन्य खर्च गर्नको लागि श्रीमतीलाइ पैसा दिन खोज्थे तब श्रीमतीले आफूसँग पर्याप्त पैसा छ भन्ने गर्थिन् । यसरी श्रीमतीले आफूसँग पर्याप्त पैसा भएको कुरा गर्दा किन पर्याप्त पैसा श्रीमतीसग हुन्छ भन्ने श्रीमानले सोच्न भ्याएनन् ।...
४० बर्षे यी शिक्षिकाको खुल्यो यस्तो कर्तुत : यसरी कलिला विद्यार्थीबाट यौन प्यास मेटाउथिन् !
काठमाडौं । विद्यालय विद्यार्थीका लागि भविष्य निमार्णको आधार हो । उनीहरुका लागि मन्दिरपनि त्यही हो आधा घरपनि त्यही हो । तर समय समयमा यही पवित्र स्थलमा गरेका काला कर्तुत बाहिर आउँने गर्दछन् । यौनसम्पर्कका लागि मानिस के सम्म गर्न सक्न त्यसको पछिल्लो उदाहारण बाहिर आएको छ । जहाँ एक शिक्षिकाले विद्यार्थीलाई धेरै नम्बर दिन र उच्च अंकका साथ उतिर्ण गराउँने भन्दैं यौनसम्बन्ध राखेको खुल्न आएको...
मैले डिभोर्स दिएको श्रीमान संग आजकाल दैनिक सेक्स हुन्छ !अब के गर्ने होला मैले ?
करुणाजी, म ३१ वर्षीय एकल महिला हुँ । मैले २४ वर्षको उमेरमा एकजना सञ्चारकर्मीसँग विवाह गरेकी थिएँ । डेढ वर्षपछि नै हाम्रो सम्बन्धमा विभिन्न समस्या आउन थाल्यो । हाम्रो सम्बन्ध बिग्रनुमा श्रीमान्को मात्र गल्ती थियो भन्ने होइन । यही कारण सम्बन्ध सुधार्न सकिन्छ कि भनेर हामीले निकै प्रयास पनि गर्‍याैं । तैपनि हामी दुईको विचारधारा, जीवनशैली एवं उठबस मिल्दै नमिलेपछि सहमतिमै अलग हुने निर्णय...
डाक्टर भन्छन् , यौन सम्पर्कबाटै ठिक हुन्छ केही रोग…
बैज्ञानिकहरुले यौनसम्पर्क गर्दा टाउकोको दुखाई तुरुन्तै ठिक हुने नयाँ तथ्य पत्ता लगाएका छन् । उनीहरुले सेक्सलाई टाउको दुखाईको अचूक औषधि भनेका छन् । आमरुपमा सेक्सबाट यति सुख मिल्छ कि शरीर र मनको थकान मेटाउछ । कसैको नजिक हुनु, उसलाई छुनु, प्यारले उसको शरीरको गहिराइमा आफ्नो एकान्त शेयर गर्नुले एक अलग्गै खालको नशा दिन्छ । र यसलाई सेक्सको जादु भनिन्छ । यति मात्रै होइन् यसले टाउकोको...